हजार घरमा बत्ती बाल्ने तयारी – Sulsule
सुलसुले २०७७ भदौ २६ गते १३:२१ मा प्रकाशित
दमौली, भदौ २६
तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको करिब एक हजार घरमा बत्ती बाल्ने तयारी गरिएको छ । विद्युत्को सुविधा नपुगेका घिरिङका गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने तयारीसहित काम अगाडि बढाइएको छ ।
गाउँपालिका–१ का पुट्टार, अत्रौली, बैदी, भन्टार, कटहरे र हात्तीडाँडा, २ का गजरकोट, काठेकोट, ४ को जिताकोट, गड्यौलीटारको हजार घरमा विद्युतीकरण बाँकी रहेको घिरिङ विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले जानकारी दिए । विद्युतीकरण अन्तर्गत कतै खम्बा गाडिएको र कतै तार विस्तारको काम भइरहेको छ । “दशैं अगाडि नै बत्ती बाल्न सकिन्छ कि भनेर काम तीव्र पारेका छौँ”, उनले राससलाई भने । गाउँपालिकाको रु. ६१ लाखको बजेटबाट सो काम भइरहेको छ ।
गाउँपालिका–४ नयाँटार, गड््यौलीटार, जिताकोट, भाटडाँडा, लोहडाँडा र गलकोटमा मिटर बक्स ल्याउने तयारी गरिएको छ । अत्रौली, कटहरे र भन्टारमा पनि विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले ‘उज्ज्यालो घिरिङ’ अभियान सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताए । जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर आएपछि करिब एक हजार ४०० घरमा बत्ती बालिसकिएको उनले जानकारी दिए । विद्युतीकरणका लागि गत वर्ष रु. एक करोड विनियोजन गरिएको थियो भने यस वर्ष कोभिड–१९ का कारण रु. १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । “तर विद्युतीकरणका लागि पैसा अपुग भयो भने भइपरी खर्चबाट भए पनि मिलाउँछौँ”, उनले भने । सो कार्यमा तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहयोग गरेको छन् ।
पुट्टारका तारा खनालले धेरै वर्षको प्रतीक्षापछि बल्ल बिजुली बलेको बताए । पुट्टारमा दुई चरणमा गरेर घरघरमा बिजुली पुगेको छ । साविक गजरकोट वडा नं. ४ मा पाँच महिना अगाडि र अर्को ठाउँमा १५–२० दिन अगाडि बत्ती बलेको छ । “बिजुलीको सुविधा नहुँदा सोलारको प्रयोग गर्दै आएका थियौँ, अब त बिजुली नै बाल्न थालिसकेको छौं”, खनालले भने ।